प्रधानमन्त्री ओलीले किन राजीनामा दिन आवश्यक ठानिएन ? : गगन थापा «
प्रधानमन्त्री ओलीले किन राजीनामा दिन आवश्यक ठानिएन ? : गगन थापा
प्रकाशित मिति : 29 December, 2020 10:32 am
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसदको सामना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली का’यरझैं भागेको बताएका छन्। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न नसक्ने अवस्थापछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नै भंग गरेको थापाको आरोप छ।
‘जो संसदको सामना गर्न नसकेर कायरजस्तो भागेको छ ऊ सडकमा क्रान्तिकारीजस्तो देखिएको छ,’ उनले नेपालगञ्जमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘संसद फेस गर्न नसक्ने ? अविश्वास फेस गर्न नसक्ने ?’
उनले संविधानमाथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालझेल गरेको तथा अपव्याख्या गरेको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा भंग हुनु असंवैधानिक भएको पनि बताएका छन्। यस विषयमा अदालतले न्याय दिनुपर्ने थापको भनाइ छ।
‘अदालतको चार किल्लाभित्र न्याय र विवेकको ह’त्या नहोस्,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखेको कुरा मात्रै अदालतले हेरे पुग्छ।’ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने न’जिर स्थापना भएमा भोलिका दिनमा सनकका भरमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरिदिने पनि थापाले बताएका छन्।
विगतमा संसद भंग गरेका प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएर अझै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिरहेको बताए। ‘किन राजीनामा दिन आवश्यक ठानिएन ?’ उनले प्रश्न गरे।